Dallad Cusub oo la magac Baxay (Somaliland United Forum) “SUF” ayaa lagaga dhawaaqay wadanka Ingiriiska Casimadiisa London | Magudhenews.com
Daawo Munaasibada 18ka May iyo Wacdaraha ay Dhigeen Shacabka iyo Ciidanka Qaranka SomalilandHargeysa(MGN):– Ardayda Jaamacadaha,Ganacsatada,Ururada Bulshada,Madax Dhaqmeedka,Ciidamada Asluubta,Ciidamada Booliska,Ciidamda Milatariga,ciidamada Illaalada Xeebaha,Ciidamada sida Gaarka ah u tabobaran(kamaandowska),Ciidamada RRU-da,Ciidanka illaalada madaxtooyada ayaa wacdaro layaab leh ka dhigay munaasibada Xuska 18 ka may, ciidamada somaliland qaybiisa oo dhan ayaa soo ban dhigay gaada ciyaar cajiiba oo ka yaabiyay indhaha shacabka somaliland kaasoo cadowga somaliland quus gown u ah,ciidanka waxa salaan ka gudoomay madaxweynaha oo ku sugnaa fagaaraha madaxdooyada somaliland hortiisa.
madaxweynaha somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (silaanyo) ayaa isna goobtgaas kasoo jeediyay khudbad taariikhi ah oo aanu goor dhow idiin soo dayn doono
waxa goobtaas indhahu qabanayeen libaaxyo guudka ka saarnaa baabuur oo dadku ka yaabeen, awr lagu sharxay calanka somaliland iyo ciidamo fardo wata ayaa ka muuqday goobtaas iyana
madax dhaqmeedka wadanka oo dharka ayn hidaha u leenahay oo ah laba go’o oo cadcad ayaa goobtaas maray sidoo kale dhalinyaro qurux badan oo isku jira ardayda jaamacadaha iyo iskuulada ayaa iyana goobtaas maray
waxay ahayd madal qiiro,iyo wadaninimo leh oo dadka shacabka ahi muujinayeen ashcaartooda iyagoo ku ciiiday farxad iyo rayn rayn
Gawaadhi gashaaman,tikniko, ciidamo kamandows ah oo sida libaaxyada u qaylinaya ayaa munaasibada lagu soo badhigay waana awooda ciidamadeenu leeyihiin oo cadowga arka dhabar jab ku ah iyo naxdin
DAAWO SAWIRADA OO KU RAAXAYSO
Xafladii 18 may Hargeysa Somaliland 2013 Dhamaan Bulshada reer Somaliland waxaan ugu Hambalyeynayaa farxada maalinta Qaranimada JSL ee 18-ka May.
 Guud ahaan waxaan dadkayga ku bogaadinayaa gudo iyo dibedba dabaal degga sannad guurada 22aad ee aasaaskii Jamhuuriyadda Somaliland.
 Waxaan Ilaahay uga mahad celinayaa Nabad-gelyada iyo Nimcada uu ina siiyey iyo horumarka uu ina waafajiyey.
Waxaan idiin cadaynayaa in waddanka Somaliland yahay:
 Waddan xor ah, Nabdoon isla markaana Dimuqraadiya.
 Waa waddan ina deeqa oo inagu fillan.
 Waa waddan ay dadkiisu gacmahooda ku dhisteen.
 Waa waddan ay dadkiisu ilaashanayaan.
 Waa waddan ay Dunidu ixtiraamto.
Walalayaal waddan kasta waxa wax ka dhiga dadkiisa, waxaa horumar gaadhsiisa Ummadiisa, waddan wuxuu taabbo-galaa oo horumar ku talaabsadaa marka dadkiisu meel u wada jeesto, isku duubnaadaan una midoobaan Qaranimada.
Horumarka dalku waa halbowlaha koowaad ee aynu higsanayno, waxaa ogtihiin halka uu dhaqaalaha wadanku marayey waanad ka war-haysaan halka aanu gaadhsiinay, balse wali fari kama qodna, weli waxaanu u faydanahay sidii uu dhaqaalaheenu ugaadhi lahaa meel halkaa ka sii fiican. Waxaanan garwaaaqsanahay baahida jirta iyo heerka ay nolosha bulshadu marayso iyo duruufa kala duwan ee ay ku nool yihiin dadkaygu, waxaan garawsanahay, oo ogahay xilka iyo masuuliyada iga saran, cidina igama jecla inay gaadhaan nolol aad
u fiican, waxbarasho, caafimaad, cunto iyo biyo ku filan, waxaanse ka xumahay in dadkaygu maanta dayaceen Xoolihii, Deegankii iyo waliba Beerihii! Sidee baynu ku horumaraynaa hadaynaan ku tacbin dhulkeena? Hadaynaan u sabrin oo u dhididin Dhulkeena? Walaalayaal, dunida maanta waynu isu furanay oo wufuud badan iyo dalxiisayaal kala duwan ayaa maalin walba ina soo booqda, Soomaalidu waxay tidhaa “hugaagu wuu kula marti tagaa”. Waxaanu dib-u-dhis, dib-u-habayn iyo dhismayaal cusub oo bilic leh ku kordhinay xafiisyada wasaaradaha dawlada badankooda. Waxaanu ka bilownay Caasimada wadooyin casri ah, si aynu ula tartano caasimadaha dalalka jaarka ah iyo kuwa dunida, in sha Allaahu goboladana waanu gaadhsiin doonaa. Waxaanu dardar gelinay dhismaha wadooyinka laamiga ah ee magaalooyinka isku xidha. Waxaan idiinku baaqayaa inaad gacan ka gaystaan oo aydaan waxba kala hadhin mashaaricdaas kala duwan ee aynu ku talaabsanay fullintooda. Beesha caalamka waxaan leeyahay, dadkaygu waxay u tashadeen aayahooda, dalkaygu wuxuu lasoo noqday Madax-banaanidiisi iyo Qaranimadiisii, Somaliland waa xaqiiqo jirta, sax iyo xaq toonana maaha in beesha caalamku iska indho iyo dhago tirto xaqiiqdaa aan hummaaga lahayn. Bulshada Somaliland waxay xaq u leedahay “Self Determination” sida Bulshada Caalamka intiisa kale. Dalkani maaha wax xalay dhashay, wuxuu leeyahay taariikh, waxaa dadkiisii u soo galeen halgan dheer, dedaal-kaas oo ay ku hanti-yeen gobanimadii 1960-kii, gumaystihii dalkooda kaga kiciyey gacmahooda iyagoo Rabi-good la kaashanaya.
Midnimada maanta la hadal hayo, dadkanaa horseed u ahaa iyadoo ay niyad wanaag iyo walaalnimo qalbigooda ka buuxdo. Nasiib daro, maalintii la is raacay shan maalmood dabadeedba Midnimadii waa lagu hungoobay, waxaanay ahayd 5tii July markii uu Yusuf Ismaaciil Samatar Gaandhi Khudbad uu jeediyey daboolka kaga qaaday xaqiiqdii Jirtay in ahayd in is-raacii aanu u dhicin sidii laga filayey Midnimadiina lagu Hungoobay! . Waxay ahayd dhacdo aan la dafiri karin in Dastuurkii laysku raaci lahaa ee Somaliland iyo Somalia ku midoobi lahaayeen dadkii Reer Somaliland ay 90% ugu codeeyeen Maya “NO”, iyagoo Diidmo qayaxan kala hor yimid, balse nasiib daro dhagahaa laga furaystay, taasi waxay dhaxalsiisay inqilaabkii dhalinyaradii Saraakiisha ahaa ee reer Somaliland ay Xilligaas sameeyeen. Kaas oo bannaanka soo dhigay tabashadii iyo dareenkii reer Somaliland. Gilgilashadaasi ismay taagin ee waxaa ku xigay Mudaharaadkii Macalimiinta ee loo yaqaanay “Bakayle-qalad” iyo is-casilaadii Wasiiradii reer Somaliland ee Xilka ka hayey xukuumadii Muqdisho. Waxaanay ahayd Nasiib-daro in aan la tix-galin dareenkaa ee sida imikaba caadada u ah Somalia in dad Suuqa jooga oo aan metelin Bulshada Lagu Buuxsado kuraasta, waxay ahayd quustii ay dadka reer Somaliland israacii kaga talax-gabeen. Muddo yar ka dib, waxaa bilaabmay qalalaasihii iyo afgembigii dawladii digteetarka ahayd, cid dambana talo lama waydiin, waxaana lagu war helay iyadoo dadka la isku xidh-xidhay laguna xasuuqay JAZIIRA, ganacsatadii qoorta laysugu dabay oo la dhigay Burco, Malko Durduuro, Kal-sheekh iyo goobo badan oo aan tiro lagu soo koobi karin.
Waxay ahayd nabar xanuun badan iyo wax naxdin leh, oo aan la ilaawi karin diyaradiihii Hargeysa ka kacayey ee duqaynayey maatadii Hargeysa ay ka baro kiciyeen ilaa intii ay dhaafeyeen xuduudka Ethiopia. Waxaan leeyahay madaxda Bulshada Somalia hindisaha Midnimada anagaa keenay nalama khasbin Shalay annagaa Somalinimada dan moodaynay ee waa nala nacsiiyey, anagaa bilaa shuruud iyo is aamin ku tagnay, waa nalagu kalifay in aan idinka aamin baxno, waanu soo tijaabinay Midnimada Kalsooni dambe naguma hadhin diyaarna uma nihin riyadii beenowday ee 5tii Somaliyeed. Wax kastoo ay nagu kalifto Madaxbanaanida iyo Qaranimada Somaliland waa lama taabtaan Go’aanka bulshaday ku timi, gummaca mujaahidkay ku dhalatay, gargaarka Eebbey ku dhisan tahay. Haddaba walaalayaal midnimo hadhay oo 5 Somaliyeed soo noqon mayso ee yaynaan walaalnimada seegin, Somalida Djibouti waa Dawlad Ilahayna haw Barakeeyo Dawladnimadooda, Soomalida Kenya Dawladooda wax ha la qabsadaan Ilaahayna ha isu barakeeyo, Soomalida Ethopia Dawladooda wax ha la qaybsadaan Illahayna ha isu barakeeyo. Somaalilandna halkeeda Alle ha u barakeeyo, dhammaanteen walaalo iskaashada aan ahaano sida walaalaha carbeed. Waxaynu dhidibada u taagnay qaran dimuqraadi ah, oo ku dhisan nidaamka axsaabta badan. Madax banaanida Garsoorka, Golayaasha sharci dejinta iyo xukuumada kaas oo ku salaysan mabadiida Caalamiga ah ee dhawrista xuquuqda aadamaha, Maamul wanaaga, Horumarka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaynu dib-u-dhis iyo horumarin ku samaynay maamulka dawladnimo, amniga, difaaca qaranka iyo adeegyada bulshada.
Inaga oo ka bilownay wadama aynu jaarka nahay waxaynu aduunyada kula dhaqanay jaar wanaag, wax wada qabsi iyo in aynaan faro galin ku samayn arrimaha ugaarka ah dalalka kale. Dhammaan talabooyinkaasi waxay ay dhabada u xaadhayaan inaynu ka midho dhalino qadiyada madax banaanida Jamhuuriyadda Somaliland, waxaynu ku talaabsanay inaynu usoo bandhigno beesha caalmka jiritaankeena, heerka aynu gaadhnay iyo sida ay inooga go’aan tahay hanashada madax banaanideenu. Waxaynu ka badheedhnay, in aynaan cidna uga waaban in aynu tagno, kana qayb-galo gole kasta oo lagaga hadlayo arimaha Somaliland, talaabadaasi waxay inoo soo kordhisay:
 Inay qadiyadeenu gaadho fagarayeyal badan oo aanay hore u gaadhiin.
 Inay qadiyadeenu noqoto mid caalamku xog-ogaal intii hore ka badan u yahay maanta.
 Inay abuurmaan dalal badan oo danaynaya gogolna u fidiyay wada hadalada Somaliland iyo Somalia.
Waxaa kulamadaas ka dhashay kana soo baxay heshiisyo caalamku goob joog ka yahay oo summad u ah jiritaanka qaranka Somaliland.
 Inaan faro-galin lagu samayn karin qaranimada JSL wax walbana lagu dhamaysto wada hadal iyo wada xaajood ku dhisan nabad gelyo iyo is ixtiraam.
 Waxaynu kasbanay daneeyayaal cusub oo maalgashi ka bilaabay dhulkeena.
Gudo iyo dibed, maanta arrimaheenu waxay galeen marxalad cusub oo aynu ku xaqiijinayno horumarka dalkeena iyo hanashada madax banaani buuxda oo aynu
gaadhno, geed dheer iyo geed gaabanba waynu u fuuli, god kasta oo ay inala gashaba waynu ka saari doonaa Insha Allaahu. Gabo-gabo Nabad galyada, Midnimada ummada iyo difaaca qaranimadu waa aasaaska dawladnimada, waxaan salaan, bogaadin iyo mahad naq u soo jeedinaya Ciidmada kala duwan ee hadh iyo habeen utaagan illaalinta nabad gelyada iyo difaaca qaranimada dalka. Waxaan taa mid la mid ah u soo jeedinayaa wax-garadka, madax-dhaqameedka, Culimada, Dhalinyarada haweenka iyo dhammaan muwaadiniinta ku garab taagan gudashada xilkooda. Waxaan ugu baaqaya Shacabka reer Somaliland inay isu taagaan dib u dhiska iyo horumarka dalkooda, inay dhexda u xidhaan una midoobaan ka difaaca gobanimadooda, cadawga gudaha iyo ka Dibeda. Waxaan ugu baaqayaa inay dhawrtaan sharaftooda, gobanimadooda, dhaqankooda iyo diintooda, marxalad kasta oo ka hortimaadana ay kaga gudbaan wadajir iyo midnimo. Waxaan balan qaadayaa inaan dalkayga iyo dadkayga ku hogaamiyo dariiqa horumarka, dhawrista xuquuqda, amniga, difaaca qaranka iyo qabyo tirka madax banaanida dalka Insha Allahu. Waxa aan eebe inooga baryayaa in aynu ku gaadhno munaasibadan teeda kale nabad-gelyo, Horumar, Ictiraaf iyo Midnimo, in Illahay qaranka ka dhigo mid waara oo dadkiisu ku noolaado Gobonimo, Barwaaqo, Sharaf iyo Horumar. Mahad Eebaa Leh, idina waad mahadsantihiin
shirkada Dahabshiil Group oo deeq lacaga iyo qalab iskugu jirta gudoonsiisay wasaarada ciyaarahaWasiirka Wasaaradda Dhalinyaradda iyo ciyaaraha Somaliland Cali Siciid Raygal ayaa deeq isugu jirta qalabka ciyaaraha aduun lacageed waxa uu maanta ka guddoomay shirkadda Dahabshiil.
Xafladda lagula kala wareegayay deeqdan isugu jirta lacagta iyo dirayska loogu talo galay xulalka kubadda cagta ee goboladda Somaliland ayaa waxa ay ka dhacday xarunta wasaaradda Dhalinyaradda iyo ciyaaraha Somaliland.
115%; FONT-FAMILY: ?Arial Narrow?,?sans-serif?; FONT-SIZE: 16pt”>Waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay Madaxa Xidhiidhka Bulshadda ee Somtel Khadar Cabdiraxmaan Cabdilaahi Waxa uu sheegay in shirkaddaha Maataanaha ah ee Somtel iyo dahabshiil ay u taagan yihiin sidii ay bulshadda reer Somaliland ugu soo celin lahaayeen waxyaabo badan.
Waxa uu intaasi ku daray in lacagtaas iyo waliba dirayska loogu talogalay ciyaartooyga Xulalka Goboladda Somaliland ee ka qayb geli doonaa tartanka kubada cagta ee Somaliland ay wax badan u tari doonto.
Madaxa Iibka iyo suuqaynta ee Shirkadda Somtel Iid Muuse Muxumed oo isna halkaasi ka hadlay ayaa carabka ku dhuftay in aanay ahayn markii ugu horeysay ee ay shirkadda Somtel ka qayb qaadato horumarinta ciyaaraha Somaliland, balse sanad kasta oo ay qabsoomayaan ay dedaalkooda ugu badan geliyaan sidii ay uga dhex muuqan lahaayeen Dhalinyaradda reer Somaliland.
Waxa uu kula dardaarmay dhalinta ka qayb gelaysa ciyaaraha in ay si habsami ah uga qayb galaan isla markaana ku dedaalaan sidii ay u muujin lahaayeen firficoonaan.
Gabogabadiina Wasiirka Dhalinyaradda iyo ciyaaraha Somaliland Cali Siciid Raygal, ayaa shirkaddaha Dahabshiil Group ku amaanay sida ay uga qayb galayaan horumarka dalka.
Waxa uu xusay ay wax wayn ka tari doonto habsami u socodka ciyaaraha iyo waliba dhiirigelinta.
Waxa kale uu soo jeediyay in shirkaddaha kala ee dalka in ay ka qayb galaan isla markaana ku deydaan shirkadda Dahabshiil Group.
cumar cabdirisaaq cali
Related Posts	Al-Jazeera oo Warbixin ka diyaarisay Somaliland
By keyd - May 18 2013 11:44 AM
Telefishanka caalamiga ah ee Al-Jazeera ayaa warbixin kooban ka diyaariyay ...
Daawo Munaasibada 18ka May iyo Wacdaraha ay Dhigeen Shacabka iyo Ciidanka Qaranka Somaliland
By keyd - May 18 2013 11:37 AM
Hargeysa(MGN):-- Ardayda Jaamacadaha,Ganacsatada,Ururada Bulshada,Madax Dhaqmeedka,Ciidamada Asluubta,Ciidamada Booliska,Ciidamda Milatariga,ciidamada Illaalada Xeebaha,Ciidamada ...
Xafladii 18 may Hargeysa Somaliland 2013
By admin - May 18 2013 08:42 AM
Dhamaan Bulshada reer Somaliland waxaan ugu Hambalyeynayaa farxada maalinta Qaranimada ...
Radio Magudhe wasiirka wasaarada madaxtooyada oo kormeer ku tagay wadada u dhaxaysa madax tooyada iyo dawlada hoose
By cumar - May 17 2013 08:05 AM
wasiirka wasaarada madaxtooyada xirsi xaaji cali xasan oo kormeer ku ...
Xisbiga mucaaradka ah ee UCID oo saaka shir jaraayid ku qabtay xafiiskiisa magaalada hargeisa
By cumar - May 15 2013 03:50 PM
Xisbiga mucaaradka ah ee UCID oo saaka shir jaraayid ku ...
Dallad Cusub oo la magac Baxay (Somaliland United Forum) “SUF” ayaa lagaga dhawaaqay wadanka Ingiriiska Casimadiisa London
Posted by admin on February 8th, 2013 11:36 AM | ku qor qalinak, RAYIGA DADKA London magudhenews Waxa habeenkii ay taariikhdu ahayd 5/02/2012 ka dhacay caasimada wadankan Ingiriska london shir balaadhan oo ay iskugu yimadeen aqoon yahanno somaliland ah oo isagu jira siyaasiyiin iyo xisbiyada qaranka somaliland oo ay uga hadleen danta guud ee wadanka ay marayso iyo sidii loo heli lahaa badbaado qaran shirkan oo ay ka soo qayb galeen sadexda xisbi qaran iyo ururadii ku haray tartankii doorashada ayaa waxa laga dhawaqay Dalad cusub oo ay ku miday san yihiin aqoonyahanadan somaliland ee ku su gan Uk daladan oo loogu magac daray Somaliland United Forum ayaa waxa ay ka hawl gali doonta wadanka gudihiisa iyo dibadiisa waxanay diyaarinaysaa ajande baladhan oo aqoonsiga somaliland loogu dooni lahaa iyo sidii ay is badal ugu samayn lahayd wadankii xaga siyaasada arimaha dibada.gaba gabadii ayaa waxa lagu doortay gudoomiye iyo laba gudoomiye ku xigeen iyo xoghayntii oo sidan aan idinku soo xusi doono magacyadooda . Dalladan oo ujeeedada ugu muhiimsan ee loo sameyay ay tahay sidii quluubta iyo Bulshadda reer Somaliland loo miidaynlahaa maadama doorashadda Golaha degaanka ee dhawaan dhacday ay kala fogeysay Bulshaddii reer Somaliland. Haddaba ujeedooyinka Dallada Somaliland United Forum (SUF) ayaa sidan ah:
1. Kashaqaynta Midnimadda iyo jiritaanka Qaranimadda Somaliland
2. Kashaqaynta Xaqsoorka iyo tiirarka Cadaaladda ee Jamhuuriyadda Somaliland kutaagantahay
3. Kashaqaynta Gooni istutaaga Somaliland iyo Ictiraafraadinta Somaliland.
4. Toosinta iyo tilmaaminta xukuumadda Somaliland wixii kaqaloocan.
5. Kashaqaynta iskuxidhka Bulshadda( Saboolka ilaa taajirka), kuna dhiirigalinayna In Tujaartu caawiso dadka Saboolka ah ee shacbiga reer Somaliland Dalladan oo ah Dallad ay usimanyihiin shacbiweynaha reer Somaliland ayaa waxaanu Bulshadda reer Somaliland ugu baaqaynaa in nagalasoo qaygalaan fikirkooga iyo arigtoodana nala wadaagaan. Email Dallada. Somalilandunitedforum@gmail.com
7- Madaxa Maaliyada Ururka Marwo Rooda Cusmaan Mustawi Xubnaha ururka oo dhamaan shacabka reer somaliland ee qurbejooga ay u furan tahay inay xubno ka noqdaan ,waxanay ugu baqeen in ay dhawaan qaban donaa shirwayne qaran oo ka dhici doona london .
« Qarax Kismaayo lala beegsaday Cidamada Dawlada
Ururadda Xuquuqul Insaanka Somaliland Oo Baaq U diray Ingiriiska »
akhriso wararka sanadkan xiisaha badnaa Tacsi Tiraanyo leh oo Kus Socota Eng Yuusuf Warsame(ALLE Ha u Naxariiste)Tacsi Tiraanyo LehJaaliyada reer somailand ee degan peghem ee dalka ingiriiska oo lacag Gudoonsiiyay Qays kakooban 5 caruura oo dhagoolayaal ah Ifraah Jaquur ( Arimaha Bulshada) Dhegeyso"Saar baa-na haleelay la yidhaa xirsi" Qalinkii Xasan Maxamuud Nuur (Xidig)Hargeysa oo Roobab Qaboojiyeen CaawaWafti uu Hogaaminayo Wasiirka Dib U Dajinta Somaliland oo Kasoo Laabtay Safar ay Kutageen FinlandAabe Qudha ka Jaray Xaaskiisii oo Xaamilo ah iyo laba caruura oo uu dhalay iyo isagii oo Xubintiisa Taranka iska JarayTACSI Tiraanyo lehTACSI18 may toronto	18 may	somaliland asker	ALLE HA U NAXARIISTO SH.C/QAADIR	Faafinta warka aan Dhabta ahayn	Isbedelka Caalamka Islaamka	Shiikh Mustafe X.Ismacil Haarun	Tafsiir Quran Surah 85 Al-Buruuj – Sh Maxamed Cabdi Umal	Tafsiir Surah 113-114 Al-Falaq iyo An-Naas – Sh. Maxamed Cabdi Umal	Tafsiir Surah 63 Al-Munafiqun – Sh Maxamed Cabdi Umal	Quraan Tafsiir Soomali Surat Albaqara (Aayada 253 – 256) by Sh Tawakal Yusu	SABIR KA SHEEK UMUL	Asxaabul Ukhduud – Sh. Mustafe Xaaji Ismaaciil	Maxaadiro murugo leh Recent Posts	Al-Jazeera oo Warbixin ka diyaarisay Somaliland
shirkada Dahabshiil Group oo deeq lacaga iyo qalab iskugu jirta gudoonsiisay wasaarada ciyaaraha
RAYIGA DADKA (97)
magudhenewsMore ku qor qalinak, RAYIGA DADKASiyaasiga iyo Sameeynta is Badal Ee Kursiigu wato Waa Dabeecado Noceeya ?Xuska Sanad Guurada 11 ee Geeridii Madaxweyne Cigaal Oo Hargeysa Si Balaadhan Looga XusayDaawo Fanaanka Cawaale yare Oo Cidla Wareega Khaatumo u Heesayo Iyo Maamuuskii Uu Ku Lahaa Somaliland Oo Baab'ayDaawo Mucjiso:Sac Dhalay Noole U eeg Qof Bini Aadam ah Wax bartaye Maxaan Qabtaa? Xukuumada Somaliland Oo Ka Tacsiyadaysay Qoyskii iyo Qaraabadii Uu Kabaxay Marxuum C/laahi Macalin(Dhoodaan) Dhab Ahan Waa Horu Mar Dhan Kasta Leh Dhaqalo Cilmi Waayo Aragnimo Cilaqadka Dibada Midka Gudaha Iyo Nuucwalba OO Ay Addanaha Ku Xariiran Iyo Nabad IslamkaWafti uu Hogaaminayo Wasiirka Dib U Dajinta Somaliland oo Kasoo Laabtay Safar ay Kutageen FinlandDaawo Gabadh Somaliyad ah oo Diinta Islaamka Kabaxday HANBALYO HANBALYO DHALASHO FARXADLEH